I-8th HbbTV Symposium kanye nemiklomelo ye-Fontons Group yama-2019 | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Okufakiwe » I-8th HbbTV Symposium nama-A2019 Shortlists Fincons Group
The Amaqembu weFincons iyiseluleko sokuhola sebhizinisi se-IT. Kusukela i-1983, i-Fincons Group igxile emizameni yayo ekuthuthukiseni ubuchwepheshe, obusizile ekwakheni idumela layo. Konke lokhu kubonga ngekhono lenkampani lokuhumusha nokulindela amamodeli amasha ebhizinisi njengokusheshisa okusheshayo kwezinhlelo ezenzelwe i-IT.
Kamuva kule nyanga, kulo nyaka IHbbTV Symposium kanye neMiklomelo 2019 kuzoba ne-Fincons Group ekhombisa iphrojekthi yayo yakamuva, i I-Smart Digital Platform kwezamabhizinisi nokusakaza. IHbbTV Symposium neMiklomelo 2019 izokwenzeka ngoNovemba 21-22, 2019 ISikhungo Senkomfa sase-MEGARON Athene e-Athene, Greece. Le khambi ingeyokuqala ukuhambisana ngokuphelele nobabili I-European HbbTV futhi okusha Izindinganiso zase-USA ATSC 3.0.
Izici zikaFincon's Smart Digital Platform
I-Smart Digital Platform (SDP) luhlaka olusebenzayo futhi olwenziwe ngezifiso ngokugcwele. Ipulatifomu yenzelwe ngqo ukuhlinzeka ngezixazululo ze-Hybrid TV ne-OTT ezisebenza njengezisusa zezimo ezintsha zensiza. Ipulatifomu ye-Smart Digital yakhelwe ukuhlanganisa namazinga wakamuva ngenkathi kulungiswa ukunwebeka futhi kukhuliswe umuntu uqobo ekhanyiselwe uhlobo olusha lwezobuchwepheshe oluzophumelela.
Ithuluzi le-Smart Digital Platform livela kokuhlangenwe nakho kokuphayona kukaFincons ngohlelo lwe-HbbTV. Lezi zicelo zifaka owaziwayo Insiza ye-Mediaset Play, kanye ne Izicelo ze-ATSC. Lezi zindinganiso ezimbili ziyaqhubeka nokuthola ukuziphendukela kwemvelo okubavumela ukuba banikeze omunye nomunye ngezifundo ezintsha nokuphefumlelwa. Lokhu kuvela kunike amandla i-Fincons Group ukuthi ikhulise iqhaza layo eliyingqayizivele ekwakheni ipulatifomu enomusa ehambisana ngempela nalezi zindlela zombili. Lokhu kuhlangana kuhlinzeka womabili ithuba eliyingqayizivele lamabhizinisi wokuzijabulisa aphesheya kanye nabasakazi. Lokhu kubalulekile endaweni yemakethe ehlanganiswe ngokwengeziwe lapho abadlali abasha bejoyina amabutho kanye nokuqukethwe ukuze basebenzise izimpahla zabo futhi bafinyelele izigaba ezibanzi zemakethe ezidlula imingcele yezwe ejwayelekile.
Uhlaka lwe-Smart Digital Platform lusiza ukusabalalisa ukusebenza ngokuzwakalayo Amamojula we- "SMART" enzelwe ukusebenza njengezindawo “zokwakha” zesisombululo se-Hybrid TV. Ipulatifomu lenza sikwazi ukuklama ikhasi ngalinye lesicelo (kufaka phakathi ukuzula), okuvumela ukuthi ikhombise izici ezifana ne-Electronic Program Guide (EPG), imininingwane yesiteshi, ividiyo ezingxenyeni ezifunwayo, nokuqukethwe okubanjwayo. Konke lokhu kubonga ngosizo lweinjini zethempulethi, futhi ngokusebenzisa uhlelo lokusebenzelana lwezinhlelo zokusebenza (i-API), i-Smart Digital Platform ivumela ukuvumelaniswa kwamafomethi wokukhombisa wevidiyo nokusebenzisana.
Ongakulindela KuHbbTV Symposium kanye neMiklomelo 2019
Uhlobo lokuhanjiswa luthunyelwe lwe IHbbTV Symposium kanye neMiklomelo 2019 ikhombisa ukuthi i-Smart Digital Platform ingawenza kanjani umsebenzi ngendlela engaguquki njengamavidiyo abukele smart. Lesi sibonelo esithile sibonisa ukuthi izinsizakalo zokufunda umshini wamafu zingasetshenziswa kanjani ukuhlaziya impahla yevidiyo, lapho umsebenzisi angabheka ngqo ukubonakala kosaziwayo ngamasu wokubona ubuso. Lokhu kungavumela abasebenzisi bokugcina ukweqa ngqo lapho kuvela khona osaziwayo, futhi ngokusebenzisa i-Smart Digital Platform, bazokwazi ukuzulazulela ngqo iziqeshana ezibonisa abalingisi babo abathandayo. Umsebenzi wale nqubo uzoqala kusuka kwizifanekiso ezinokulungiseka lapho isicelo senziwa khona ngokuzenzakalela kwikhodi yokuhambisana ye-HbbTV2 noma ye-Atsc3.0. Lesi sici esiyingqayizivele sisebenza njengomnyango wamathuba amasha kakhulu futhi ngenxa yesakhiwo sawo esivamile nesihlanganisiwe, amabhizinisi azokwazi ukubona ukubuyiselwa kwemali ngaso sonke isikhathi senqubo.
Isekela Lika-CEO Fincons Group kanye ne-CEO Ama-Fincons.US, UFrancesco Moretti
I-Fincons Group izobe isebenzisa i-Smart Digital Platform yayo ngokuqashelwa kobuso obunamandla obuyi-Artificial Intelligence-powered at HbbTV Symposium umcimbi. Ngesikhathi somcimbi, Isekela Lika-CEO Fincons Group kanye ne-CEO Ama-Fincons.US, UFrancesco Moretti, izobamba iqhaza esifundweni setafula eliyindilinga lapho UDkt. Jörn Krieger izosebenza njengomengameli. Iseshini yetafula eliyindilinga izobizwa ngokuthi "Ngabe i-HbbTV inikezela ngamathuluzi afanele abasakazi nabasebenza," futhi izoba ngoNovemba 21st ku-17: 10.
Inhloko Yezokuthuthukiswa Kwebhizinisi Lwamanye Amazwe kanye Nokusungula, u-Oliver Botti
Kanye noMoretteir, iNhloko yakwaFincons Yezokuthuthukiswa Kwebhizinisi Lwamanye Amazwe, U-Oliver Botti, izokwengamela iphaneli ku-HbbTV namanye amaZinga okusebenzisana. Leli paneli lizoba ngoNovemba 22nd e-12: 10 lapho ezobe ejoyina khona inkulumo-mpikiswano yephaneli, elungiswe ngabakwaMedaset Angelo Pettazzi. Ukugxila kwephaneli kuzogxila ku- "Ukukhangisa Okuqondisiwe: i-Business State of the Art," ezokwenzeka ngoNovemba 21st e-14: 40 lapho ingxoxo izogxila khona 'Obsessive' (futhi yimpumelelo) izivivinyo zemakethe ze-HbbTV. Le ngxoxo izokwenza faka iminyaka emibili yeMedaset Play "isivivinyo semakethe ebukhoma" esiqhubekayo kokuqukethwe okusebenzayo nokukhangiswa, ngokubhekiswa ngokukhethekile ekukhishweni kwakamuva kweRT Dynamic Advertising Replacement.
Lapho ekhuluma ngezindinganiso zeHbbTV ne-ATSC 3.0, uFrancesco Moretti uqhubeke nokusho “Njengoba sisebenze kakhulu kuwo womabili amazinga we-HbbTV ne-ATSC 3.0, siyaziqhenya ngethuluzi leSmart Digital Platform, elihola indlela ngokuguquguquka nokuqina kwesisombululo njengesixazululo. Kuyangijabulisa ukukwazi ukuhlanganyela ithuluzi nabachwepheshe kuwo wonke umphakathi we-HbbTV futhi ngilindele ngabomvu ukushintshana ngemibono nabanye abaholi bezimboni engqungqutheleni. ”
Fnoma ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu, Amaqembu weFincons wenze impumelelo enkulu emkhakheni wezindaba njengeqhinga le-Partner ye-IT. Impumelelo yale nkampani ibe ngumphumela wekhono layo lokwakha ubudlelwano obuqinile nobakhayo namakhasimende asuselwa kubuchwepheshe nokwethembana. Kepha lokho ngesinye nje sezingxenye ezenza iFincons Group igqame njenge okuholela IT ukuhweba ibhizinisi lapho isici sothando senze iphuzu elibalulekile lereferensi lapho ukuhlinzeka ngohlu olubanzi lwezinsizakalo nezixazululo ezisukela
Ukuthuthukiswa kwezisombululo zebhizinisi
Ngeminye imininingwane ngeFincons Group, bese uhlola www.yygidart.com. Ukuze ubhalisele i-8th HbbTV Symposium ne-2019 bese uqhafaza lapha.
Amamojula we- "SMART" Izicelo ze-ATSC Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe iqembu le-fincons I-FOR-A, izinhlelo ezihlukile, I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor hbbtv IHbbTV Symposium kanye neMiklomelo 2019 Ukuhlanganiswa Ukubonisana kwebhizinisi le-IT Izinhlelo ezisuselwa ku-IT Insiza ye-Mediaset Play Ott I-Smart Digital Platform I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo 2019-11-14
Ngaphambilini: Amabanga we-Remesh CP Grade "Kumbalangi Nights" kanye ne-Dizens of Another Films nge-DaVinci Resolve
Olandelayo: Ukugcinwa kwe-PixStor Kuqinisekisa ukuthi i-Jellyfish Photo Meets Ihlangabezana nezidingo zokuphepha zohlu lwe-blockbuster